चीनका सडकमा गुड्ने शानदार जीडब्ल्यूएमका एसयूभी र पिकअप नेपालमा - सुनाखरी न्युज
चीनका सडकमा गुड्ने शानदार जीडब्ल्यूएमका एसयूभी र पिकअप नेपालमा
Posted on: July 20, 2021 - 1:26 pm
सुनाखरी न्युज / काठमाण्डौ – ग्रेट वालमोटर्स(जीडब्ल्यूएम) नेपाली बजारमा तीन नयाँ मोडेलका गाडीहरुको साथमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको अटोमोटिभ डिलरशिप क्षेत्रमा विविध अनुभव बोकेको बिशाल ग्रुपको सहायक संस्था भी.जी.इम्पेक्स प्रा. लि. नेपालमा ग्रेट वाल मोटर्सका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो ।
विभिन्न क्षेत्रहरुमा सफलता सँगालेको अनुभवलाई उपयोग गर्दै भी.जी.इम्पेक्सले जीडब्ल्यूएमसँग सहकार्य गर्दै अहिले दुईवटा एसयूभी र एक पिक–अप मोडेल बजारमा ल्याएको छ । यी तीनैवटा गाडी आफ्नो समूहमा नौलो र उत्कृष्ट रहने कम्पनीको दाबी छ । ग्रेट वाल मोटर्सको शोरुम थापाथलीमा छ । निकट भविष्यमा उपभोक्तालाई उच्चस्तरको अनुभव दिन देशभरि नैं शोरुमहरुको बृहत सञ्जाल फैलाउने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न अहिलेको परिस्थितिमा सुधार आउनासाथ ग्रेट वाल मोटर्सले नवीन तरिकाले आफ्ना ब्राण्ड र सामानहरु उपभोक्तामाझ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालमा आयात गरिएका विभिन्न मोडलहरुमा के विशेषता छ त ?
ईन बिल्ट इन्टेलिजेन्ट मोबिलिटीले अधिकतम स्पीडमा एलटू स्तरको अटोमेटिक एसीसी ड्राईभको आनन्द दिन्छ । ट्राफिक सिग्नल चिन्ने र लेनमा रहिरहने व्यवस्थाले गाडी गुडाउने चालकलाई सुरक्षा र गाडीमाथि आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा भएको अनुभूति दिनेछ । गाडीको भित्री बनावट, लेदर सिट एवं बढी लेग स्पेसले आफू एउटा शान्दार सवारीमा विराजमान छु भन्ने अनुभूति गराउने कम्पनीको भनाई छ । प्रारम्भिक मूल्य रु. ९६,९९,९९९ भएको यो गाडी तीनवटा रंगहरु हेमिल्टन व्हाईट, अयेर्स ग्रे र अत्लान्तिस ब्लुमा नेपालमा उपलब्ध हुनेछन् ।
यो मोडेल पनि तीनवटा संस्करणमा प्रस्तुत गरिंदैछ । १.५ लिटरको दमदार टर्बो पेट्रोल इन्जिनले ११० किलोवाट शक्ति र २२० एनएम टोर्क डिसप्लेसमेन्टले अधिकतम आउटपुट दिन्छ । बढी ग्राउण्ड क्लियरेन्सले नेपाली सडकमा गाडी गुडाउने अनुभवलाई अर्कै स्तरमा पुर्याउने कम्पनी दाबी गर्छ। चार किसिमको ड्राईभ मोड, इलेक्ट्रिक पार्किङ्ग ब्रेकिङ्ग र ७३ प्रतिशत उच्च गुणस्तरको स्टीलले बनेको यो गाडीको बनावटले विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नेछ ।
धेरै वर्षदेखि जीडब्ल्यूएमका एसयूभी तथा पिकअपहरुले चिनियाँ बजारमा बिक्रीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो एक विश्वस्तरमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाउने पहिलो चिनियाँ अटोमोवाइल कम्पनी पनि हो । जीडब्ल्यूएमले सन् १९९८ देखि अटोमोबाइल निर्यात गर्न सुरु गरको थियो, विशेष गरी एसयूभी र पिकअप ट्रक । चीनबाहेक, फर्मले ६० भन्दा बढी देशहरूमा ५०० भन्दा बढी वितरकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क मार्फत आफ्ना उच्च–गुणस्तरका मोटर गाडीहरु वितरण गर्दछ। कम्पनीले विश्वव्यापी रूपमा एक नयाँ बर्चस्व स्थापित गरेको छ भने नेपालमा पनि यही परम्परालाई कायम गरी नेपालीको मनमा बस्ने विश्वास लिएको छ ।
टिभिएस एनटर्क रेस एडिसन २५ जुलाईमा नेपाली बजारमा आउने
टाटा मोटर्सले श्रावण १२ गते नेक्सन इभी सार्वजनिक गर्ने